३ करोड नेपालीले हेर्ने पर्ने भिडियो : खुट्टैले खाने खुट्टैले लेख्ने ! यस्तो अवस्थामा आमाले छोडिन्, दुवै हात नभएकी पवित्रालाई……(भिडियो सहित) « Onlinetvnepal.com
३ करोड नेपालीले हेर्ने पर्ने भिडियो : खुट्टैले खाने खुट्टैले लेख्ने ! यस्तो अवस्थामा आमाले छोडिन्, दुवै हात नभएकी पवित्रालाई……(भिडियो सहित)
Published : 14 March, 2019 5:43 pm
१२ वर्षकी पवित्रा विक। बाबा आमाको काखमा बसेर खेल्ने पढ्ने उमेरकी। साथीभाईसँग रमाईलो गर्ने बेला तर यी सबै रहर उनका लागि रहरमै सीमित छन्। अहिले उनलाई उनका दुई हातको साथ मात्रै होईन बाबा आमाको अपार माया पनि चाहिएको छ। पवित्राको लागि उनका दुई हात मात्रै होईन् आँफैलाई जन्मदिने बाबा आमाको काख पनि अहिले टाढा छ।
आमा कृष्णा विक पैसा कमाउन विदेश गएकी छन्। बाबा ओम बहादुर विक गाडी चलाउने काम गर्छन्। दुबै जना पवित्रा भन्दा टाढा छन्। पोखरा बसाईको रुट पर्दा बाबा पवित्रालाई भेट्न आउँछन् तर आमासँग भेट नभएको वर्षौं भयो। उनी अहिले ७४ वसन्त पार गरेकी हजुरआमासँग बस्दै आएकी छन्।
पवित्रा पोखराकै एक स्थानीय विद्यालयमा कक्षा पाँचमा पढ्दैछिन्। उनी शारीरिक रुपमा अशक्त छिन्। खुट्टाले लेख्छिन्। खुट्टाले कति राम्रो चित्र कोर्छिन्। सामान्य रुपमा हामीले दुई हातले गर्ने कतिपय काम उनी खुट्टाले नै गर्छिन्। सामान्य मान्छेको दाहिने हात सकृय भए जस्तै गरी उनको भने देब्रे खुट्टा सकृय हुन्छ । उनी देब्रे खुट्टाले नै लेख्छिन्। भिडियो :